‘आफ्नै गाउँ फर्की आएँ’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
विदेशबाट रमाउँदै आफ्नै भूमिमा
असोज १९, २०७६ आइतबार ९:३३:१० | बेदानन्द जाेशी
काठमाण्डौ – न गर्मी, न जाडोको मौसम । खुलेको आकाश । दशैँको शुभकामना लेखिएका विज्ञापन । त्रिभुवन विमानस्थलमा मान्छेको बाक्लो आउजाउ छ । कोही जहाज चढ्दै छन् भने कोही ओर्लिंदै छन् । जहाजबाट ओर्लनेहरु ट्रली गुडाउँदै ट्याक्सी भएतिर जाँदैछन् ।
यसैगरी ट्रली गुडाउँदै हुनुहुन्छ, सर्लाही इश्वरपुरका कमल पुडासैनी मगर पनि । हँसिलो अनुहार, कसैलाई देख्न हतारिएका आँखा । उहाँका नजर टक्क गएर विमानस्थल बाहिर उभिरहेकी एक महिलामा अडिए । उहाँ मुस्कुराउँदै उतैतिर जानुभयो ।
केहीबेर दुवै जनाले एकअर्कालाई हेरिरहे । निकै भावुक बने । दुवैको अनुहार खुशीले पुलकित भयो । धेरैपछि विदेशबाट फर्किएका श्रीमानलाई देखेर सुरुमा लजाउनुभयो मनिता कुमारी पुर्वाछाने । अनि कुरा सुरु गर्नुभयो, ‘आरामैसँग आइपुग्नुभयो नि ?’
कमल फिस्स हाँस्नुभयो । हाँसेरै जवाफ दिनुभयो, ‘अँ, आरामैसँग पुगेँ नि ।’
सन् २०१० मा कतार गएका कमल यसअघि तीन वर्ष पहिले आउनुभएको थियो घर । त्यतिबेला केही दिन बसेर फेरि कतार उड्नुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समयदेखि कतारमा काम गर्दै आएका कमललाई घरको न्यास्रोले सताइरहन्थ्यो ।
कतार गएको यति लामो समयमा उहाँले दुई पटक मात्र घरमा दशैँ मनाउन पाउनुभयो । ‘यसपालिको दशैँ त घरमै मनाउँछु भनेर आएको’, उहाँले भन्नुभयो, ‘घरमै दशैँ मनाएजस्तो कहाँ हुन्छ र विदेशमा !’
धेरै वर्ष श्रीमानबिना नै दशैँ मनाउनुभयो मनिताले पनि । तर यसपटक श्रीमान् साथमै हुनुहुन्छ । उहाँ निकै खुशी देखिनुहुन्छ । खुशीले मनिताको मन ढकमक्क फुलेको छ । धेरै वर्षपछि श्रीमानसँगै दशैँ मनाउन पाउँदा कसको मन फुल्दैन र ?
वैदेशिक रोजगारीबाट दशैँमा घर फर्किन नपाएकाहरुका श्रीमतीलाई कस्तो लाग्दो होला ? कति खल्लो हुन्छ होला दशैँ ?आखिर जसले पीडा भोगेको हुन्छ, सुखको अनुभूति पनि उसैले लिन्छ । त्यही भएर त यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ छ मनितासँग ।
‘उहाँ नहुँदा त कस्तो खल्लो खल्लो लाग्थ्यो दशैँ’, श्रीमानतिर हेर्दै भन्नुभयो, ‘योपालि त धेरै नै रमाइलो हुने भयो ।’
‘दशैँकै लागि काम छाडेर घर आएँ’
सन् २०१० मा कतार गएदेखि कमल एउटै कम्पनीमा काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ टेकफ्यान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा अफिस ब्वाइको काम गर्नुहुन्छ। महिनाको ५० हजार रुपैयाँ जति कमाइ हुन्छ ।
तीन वर्षदेखि घर आउन पाउनुभएको थिएन । त्यसमाथि घरमा दशैँ नमनाएको त चार/पाँच वर्ष भइसकेको थियो । त्यही भएर यस पटक दशैँ पनि मनाउने भनेर घर आउन खोज्नुभयो । तर कम्पनीले बिदा दिएन ।
मनै त हो नि ! धनभन्दा मन ठूलो भन्छन् । दशैँमा घर जाने कमलको मनको अगाडि कम्पनीको केही लागेन । ‘बिदा नदिए पनि म त जान्छु भनेर आएको नि’, उहाँले भन्नभयो, ‘छुट्टी मिल्दैन भन्यो, मैले क्यान्सिल हानेर आएँ ।’
देशको माया, परिवारको माया र मुखैमा आएको दशैँको मायाको अगाडि विदेशको जागिरको केही चलेन । दश वर्षदेखि काम गर्दै आएको जागिर दशैँको लागि भनेर चटक्कै छोडेर आउनुभयो । अब कम्पनीले बोलाएर भिसा पठायो भने जाने नभए नजाने सोच्नुभएको छ ।
‘आफ्नो देश भन्या आफ्नै देश हो नि’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पैसा धेरै कुरा हो तर पैसाकै लागि देश र परिवारको माया मार्न त भएन नि ।’
आएँ फर्केर विदेशबाट रमाउँदै आफ्नै भूमि
विदेश जानु हुँदैन, देशलाई माया गर्नुपर्छ, स्वदेशमै उद्यम गर्नुपर्छ भन्छन् । तर कमललाई भने यस्तो लाग्दैन । ‘परदेशिने मान्छेलाई देशको माया हुँदैन भन्ने छ र?’, उहाँ भावुक हुँदै भन्नुहुन्छ, ‘परदेशिनेलाई झन् बढी देशको माया हुन्छ ।’
‘बाध्यताले पो विदेश जाने हो त’, उहाँ थप्नुहुन्छ ।
परदेश जाँदा पीडा थाहा हुन्छ । देशको न्यास्रोले पिरोलेको हुन्छ । त्यही न्यास्रोलाई भुल्न गीत गुनगुनाउँछन् । दिनभरीको थकानलाई भुलेर राति कोठामा आएर देशको बारेमा दुई शब्द डायरीमा लेख्नेहरु पनि परदेशिएकाहरु नै हुन्छन् ।
कमल आफै गीत लेख्नुहुन्छ । गाउनु पनि हुन्छ । उहाँले तीन वर्ष पहिले ‘आफ्नै हो जन्मभूमि आफ्नै हो सुन्दर भूमि, आएँ फर्केर विदेशबाट रमाउँदै आफ्नै भूमि’ भन्ने गीत रेकर्ड गराउनुभएको छ ।
यो दशैँमा गाउँघरका कार्यक्रममा यो गीत गाउने निकै धोको छ कमललाई । कमल जस्तै दशैँमा घर आउनेहरु धेरै छन् ।
विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्कनेहरुको दृश्यले जोकसैलाई एकपटक सोच्न बाध्य पार्छ, ‘खाडीमा पसिना बगाइरहेका सबै नेपाली युवाहरुले आफ्नै देशमा चाडपर्व मनाउन पाउने दिन कहिले आउला ?’